बिजनेस होम – Page4– rastriyakhabar.com
कुन -कुन क्षेत्रमा कर घट्यो त ?
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क पनि हटाइएको बताउनु भयो ।उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सारकाे कर दर घटाएको छ । मास्क तथा स्यानिटाइजर उत्पादन..
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट (पूर्णपाठ हेर्नुहोस)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्याय बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट गत वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड ९१ लाखले कम हो । हेर्नुहोस बजेटको पूर्णपाठ..
यो वर्ष ९२ अर्ब ऋण थपियो, नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । यो वर्ष नेपाललाई झण्डै ९२ अर्ब ऋण थपिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश गर्दै नेपाल तिर्नुपर्ने ऋणमा ९१ अर्ब ९० करोड बढेको जानकारी दिएका हुन् । २०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा ९१ अर्ब ९० करोड थप भई फागुनसम्म कुल..
शुल्क लिएर र्‍यापिड परीक्षण नगराउ सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विपन्‍न तथा जोखिममा परेका वर्गका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर र्‍यापिड किटबाट कोरोना परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कम आय भएका, विदेशी भूमिबाट लुकीछिपी नेपाल आउन..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सफा नोट नीतिका विषयमा थप स्पष्ट पारेको छ । बैंकले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सफा नोटका सम्बन्धमा आएका गुनासालाई समाधान गर्न थप प्रष्ट पारेको हो । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो संस्थामा प्राप्त हुन आएका नोटलाई एटिएम लगायतका मेशिनको माध्यमबाट..
बजेटबारे पार्टीमा छलफल नभएकोमा नेकपाका नेताहरु असन्तुष्टि
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुँदै गरेको बजेटबारे पार्टीभित्र छलफल र परामर्श नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणलाई लिएर पार्टी नेताहरुसँग छलफल नगरेकोमा सचिवालयतहकै नेताहरुसमेत असन्तुष्ट छन् । तीन दिनपछि संसदमा आगामी आर्थिक..
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र निर्माण गर्न लागिएको चार वटा नयाँ शहरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत गठन गरिएको काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिले चारवटा नयाँ सहर निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको बताएको छ । समितिको..
प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यकम जेठ १० गते प्रस्तुत हुने
रुपन्देही । प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते ३ बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश ५ मा रहेका तराईका ६ जिल्लामा २ सय र..
बागलुङ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन नदिन सदरमुकाममा सञ्चालित बैंकले आलापालो गरी सेवा दिने भएका छन् । २८ बैंकमध्ये अधिकांश हप्ताको दुई दिन र केही तीन दिन खुल्ने भएका हुन् । बागलुङ नगरपालिका र बैंकर्स एशोसिएसनबीचको समझदारीमा उक्त निर्णय भएको हो । बैंकले बिहान ११ देखि १ बजेसम्म मात्र सेवा दिने गरी..
आन्तरिक राजस्वलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाइने
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्वलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले आन्तरिक राजस्वलाई प्रमुख आम्दानीको श्रोतको रुपमा लिने बताएकी हुन् । आर्थिक वर्षमा फजुल खर्च घटाएर चालू..
अख्तियारद्वारा धनगढी उपमहानगरपालिकाका कागजात नियन्त्रणमा
काठमाडौं । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरले छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । धनगढीस्थित ठाकुर ट्रेड लिंकलाई चामललगायतका सामग्री आपूर्तिको ठेक्का दिँदा अनियमिता भएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले आज छापा..